Madaxweyne Xasan oo xalay jeediyey khudbad ku aadan 1-da Luulyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo xalay jeediyey khudbad ku aadan 1-da Luulyo
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxda ugu sarreysa dalka ayaa hambalyo ku aaddan 1-da Luulyo, 54 guuradii kasoo wareegatay markii gobollada koonfureed ay ka xuroobeen gumeystihii Talyaaniga, ayna midoobeen gobollada waqooyi iyo koonfur u diray umadda Soomaalida.
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed, Wasiiro, xildhibaanno iyo dadweyne kale ayaa ka qeyb galay munaasabadda 1-da Luulyo oo xalay lagu qabtay dugsiga tababarka Jeneraal Kaahiye ee magaalada Muqdisho.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay heysato fursad wanaagsan oo ay markale kusoo noqon karto heybaddii ay ku laheyd caalamka, isagoo shacabka ugu baaqay horumar iyo midnimo.
Guddoomiyaha baarlamaanka Prof Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa hambalyo kadib u sheegay shacabka inay soo dhawaatay guusha iyo horumarka Soomaaliya.
Ra’iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa tilmaamay in 1-da Luulyo ay muhiimad gaar ah u leedahay umadda Soomaalida, isagoo xusay in dhowr iyo labaatan sano kadib Soomaaliya ay dib usoo kabaneyso.
Khudbadda Madaxweynaha ayaa ku bilaabatay sidan:-
Gudoomiya Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya
Raiisul Wasaaraha JFS
Xildhibaanada Sharafta leh
Hobolada kala duwan
Qeybaha kala duwan ee Bulshada
Assalaamu Caleykum Waraxmatullahi……………………
Dhamaan bulsha weynta soomaaliyeed waxaa sharaf weyn ii ah in aan halkan idinkula dabaaldego caawa xafladan ku aadan maalinta qiimiga gaarka u leh dhamaan umadda Soomaaliyeed meelwalba ay joogaan.
1-da luulyo waa maalinta gebi ahaan is beddel weyn ku samesay taarikhda umadda Soomaaliyeed. In aan idinla xuso maalintan qiimaha badan waxay ii tahay sharaf aad u weyn, waxayna igu abuureysaa farxad aan la koobi Karin.
Waa maalintii Calanka Xuriyadda markii ugu horeysay laga taagay dhulkeena ayadoo lagu midoobay 54 sano kahor.
MAANTA MAANTA WAA MAALINWEYNEE MAANTA,
MAANTA MAANTA WAA MAHAD ILAAHAY MAANTA
MAANTA MAANTA MADAXEEN BANAANE MAANTA
Goormaan ladnaanayee lixdankii, lugooyadii nadeysayee lix iyo labaatankii juun, kowda luulyoo labaa midoowday.
Waa maalintii sanado badan ee halgan kadib la helay xornimo. Halkan masoo gaari laheyn maanta haddii wiilashii iyo gabdhihii geesiyaasha ahaa aysan dhiigooda, maalkooda, iyo naftoodaba noo hurilaheyn si aan xurnimo u helno.
Sidaa daraadeed waa in aan geed dheer iyo geed gaaban u fuulnaa si aan u adkeynlaheyn midnimadeena iyo wadajirkeena, cadowgii aan wadanka ka xurreynay 54 sano kahor, wuxuu ahaa gumeyste ajnabi ah, maantana cadowga naga hortaagan in aan xuriyadeena ku naaloono waa argagaxiso caalami ah oo isticmaalaya wajiyo iyo wiilal Soomaaliyeed, hadaba waa inaan si wada jir ah ula dagaalannaa cadowga argagaxisada si aan dhulka iyo shacabkeenaba uga xureynaa meel walba ay ka joogaan wadanka.
Waxaan wada hubnaa in halganka xuriyada uusan si sahlan ku imaan sidaas daraadeed waxaa inala gudboon in aan kashaqeyno xasilinta dalka iyo nabad waarta . Sida aabayaasheenii iyo hooyooyinkeenii ay si adag ula dagaalameen cadowga waa in aan inaguna ula dagaalannaa cadowga maanta si aan u gaarsiino nabad iyo xasilooni Soomaaliya oo dhan.
Taarikhiyan umadeena waxaa lagu yaqaanaa geesinimo, Kuwa u dagaalamayo nabada waa geesiyaal, Kuwa u dagaalamayo in ay caruurtooda helaan nolol wanaagsan si ay wax u bartaan waa geesiyaal, Dhaqaatiirteena iyo kalkaliyayaasha kuwaas oo maalin iyo habeen u taagan badbaadinta dadkeena waa geesiyaal, Macalimiinteena waxbaraan ubadkeena si ay u helaan mustaqbal wanaagsan oo ay inagu bedelikaraan birito waa geesiyayaal, Shaqaalaha rayidka, dowlada hoose, bulsha weynta iyo shaqsi kasta Soomaali ah oo u kallaha shaqo nadiif ah, hadii uu joogo Hargeyso, Kismaayo, Baydhabo amaba Muqdisho, Taariikda ayaad geesi u tahay dadka Soomaaliyeedna way ku tashanayaan geesinimadaada.
Waxaa amaan iyo boogaadin gaar ah aniga shaqsiyan iyo sidookale idinkaba idinka mudan ciidamada dowlada Soomaaliyeed oo taarikhda baal dahab ah ka galay sida geesinimada leh ay cadowga uga xureeyeen magaalooyin badan.
Run ahaantii waxay u suurtageliyeen dadkeena in ay nabad iyo nolol xuriyad leh dib ugu soo noqoto. Sidookale geesiyaasha ciidamada amniga oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo 24ka saac taagan wadooyinka si ay inoo wada ilaaliyaan cadowga. Ciidankaas sharafta leh ayaa runtii ah halyeyga maanta. Sida Captain Daahir Gurxan Maxamuud
Waxaan idinku wada boorinayaa in aad si hagar la’aan ah ula shaqeysaan una caawintaan ciidankeena sharafta leh ee aan daraadood nabad ugu jiifano uguna soo toosno.
Waxaan sidookale u mahadcelinayaa dhamaan geesiyaasha Soomaaliyeed waa suurtagal inaan magacyadooda ama wijiyadooda wada aqoon laakiin waxaan hubaa inaad inoo dadaaleysaan habeen iyo maalinba si aan nolol amni leh ugu noolaano.
Anigoo ka faa’iideysanayo fursada munaasabadan xuriyada iyo Bisha Barakeysneyd ee Ramadaan, in Umadda Soomaaliyeed ay is cafiso, qilaafaadka dhexdoodana ay ku xaliso wada hadal iyo isfahan.
Ugu dambeynti waxaan umadda Soomaaliyeed meelwaliba aad joogtaan idin leeyahay nabad ayaa naas lanuuga leh, waxaana nabad lagu waaraa marka aan WADAJIR nahay Aan si wadajir ah u wada ilaalino hadiyadii xuriyada ay inooga tageen aabayaasheena si ay caruurteena nooga dhaxlaan nolol amni ah meelwalba Soomaaliya kamid ah.
Markale iyo Markale HAMBALYO HAMBALYO HAMBALYO
Askari ka tirsan ciidamada Dowladda Hoose oo lagu dilay Afarta Jardiino
Kay: Waxaa ku fikereynaa sidii Soomaalidu u heli laheyd nabad iyo mustaqbal